လေးစားရပါသော WWM Customer များသို့ | Web Design Development, Domain, Hosting Servers Services
လေးစားရပါသော WWM Customer များသို့
WWM – Upgrading SSD Flashcache with RAID-10 with BBU
လာမည့် September, 4th 2014 at 9:00PM ခန့်တွင် World Wide Myanmar ၏ Server တစ်လုံးအား Hardware Upgrade လုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ WWM Customer များ၏ Website များ ကျသွားခြင်းမရှိနိုင်ပါ။ သို့သော် အကယ်၍ လူကြီးမင်းတို့၏ Site များ Server Maintenance ပြီးတဲ့အချိန်အထိ ဖွင့်မရခဲ့ပါက [email protected] ဖြစ်စေ ဖုန်း +95 9450043919 သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ Hardware အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း နှင့် Server Migrate လုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သုံးစွဲသူတို့အဆင်ပြေ မြန်ဆန်ပြီး Data များ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန် Server အား Solid State Disk (SSD) Flashcache , RAID-10 with BBU တို့ဖြင့် ထပ်မံအားဖြည့်ထားပါသည်။
Due to an ongoing issue with the server your shared hosting is hosted on, we will need to perform an emergency maintenance on the server. The maintenance will take place on September, 4th 2014 at 9:00PM. The maintenance take roughly 30 minutes to complete.
Date & Time: September, 4th 2014 GMT : 9:00PM
Reason: Hardware Replacement and Migration
Action required by Customer: None.
Additional Details: Upgrading SSD Flashcache with RAID-10 with BBU